Shaqaale ka tirsan dowladda oo tababar u aaday dalka Burundi | Radio Muqdisho
Shaqaale ka tirsan dowladda oo tababar u aaday dalka Burundi
Published on January 13, 2013 by admin · No Comments · 2,188 views
Tiradii ugu badneyd oo shaqaalaha dowladda ah ayaa maanta ka Ambabaxay dalka kadib markii ay heleeen deeq wax barasho oo la Xiriirta shaqada ay dowladda u hayaan, wax ayna ka ambabexeen Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde iyagoo ku sii jeeda dalka Burundi Oo ay ku soo qadanayaan tababar la xiriira aqoontooda.
Tirada tababarka loogu tala galay ayaa ah 120 qof oo ka kala socda Xafiisyada madaxweynaha xafiiska R/wasaaraha iyo guddoomiya Baarlamaanka waxaana maanta suurtagashay in ay u ambabaxaan ilaa iyo 88 qof oo ah shaqaalaha dowladda halka inta hartay ee gareysa 32 Qof ay anbabixi doonaan 20 bishaan ay ku gudo jirno.
Agaasimaha waaxda shaqaalaha ee wasaaradda adeegga bulshada Aweys Sheekh Xadaad oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in Maanta qeybtii ugu horeysay ay duulayaan dhawaana ay duulidoonaan Qeybta hartay.
Sidoo kale wasiir ku xigeenka wasaaradda hormarinta iyo adeega Bulshada oo la hadlay shaqaalaha tababarka u aadayay dalka Burindi Ayaa dardaaran adag u jeediyay shaqaalaha siminaarkaas u surta gashay Iney u ambabaxaan.
Maahan markii ugu horeysay oo ay dalka dibadiisa loo qaado shaqaale Ka tirsan dowladda Soomaaliya si ay u soo qataan tababarro ku aadan Howlahooda.